Dhinacyada South Sudan oo hub keydsanaya - BBC News Somali
Dhinacyada South Sudan oo hub keydsanaya
5 Nofembar 2015
Image caption Ciidamo ka tirsan milateriga South Sudan
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa waxaa lagu eedeeyay dowladda iyo fallaagada South Sudan, in ay hub kaydsanayaan, taasi oo xadgudub ku ah heshiiskii nabadda ee la saxiixay bishii Agoosto.
Warbixinta oo ay isku soo dubarideen guddi khubara ah ayaa sidoo kale sheegayso in ay jiraan dilal, kufsi iyo tuulooyin la gubay, inkastoo labada dhinac ay saxiixeen heshiis lagu soo afjarayo dagaalka socday kudhawaad labada sano.
Guddigan khubarada ah ayaa warbixinta ay u gudbiyeen Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa ay ku sheegeen in labada dhinacba ay sare u sii qaadayeen keydka hubka iyo rasaasta, bilooyin kaddib markii ay saxiixeen heshiiska nabadda.
Warbixintu waxa ay sidoo kale ka faaloonaysaa in ugu yaraan 50 kiis oo kufsi ah la diiwaan galiyay bishii Oktoobar oo kaliya, iyadoo la xaday oo la gubay guryo, sidoo kalana ay halkaasi ka jirto dhac lo’ oo aad u baahsan.
Warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in dagaalka uu weli ka socdo qeyba ka mid ah dalka, halkaasi oo ay ku barakaceen kumannaan qof, kuwaasi oo haatan ku nool cooshado iyo xeryo ammaan ah oo ay leeyihiin Qaramada Midoobay.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa weli ku kala qeybsan in South Sudan lagu soo rogo cunaqabateenno iyo xayiraado dhanka hubka ah.
Ruushka iyo wadammada Afrika ayaa tallaabadaasi ka soo horjeestay, inkastoo uu goluhu ku goodinayo in uu cibaaqi doono cidkastaa ee ku xadubta heshiiskii la saxiixay bishii Agoosto.
Dhanka kalana hay’adaha gargaarka ayaa waxa ay ka digeen in ku dhawaad 4 milyan oo qof laga cabsi qabo in ay haatan wajahaan macaluul baahsan xilli xaaladda bini’aadamnimo ee dalka ay ka sii darayso.